Fitohanana amina kilaometatra maro… : kamiao mpitondra kaontenera nivadika, nanapaka ny lalana | NewsMada
Fitohanana amina kilaometatra maro… : kamiao mpitondra kaontenera nivadika, nanapaka ny lalana
Nianjera avy eny ambonin’ny kamiao nitondra azy, ka nibahana nanapaka tanteraka ny lalam-pirenena faharoa ny kaontenera be iray, teo anelanelan’i Ranomafana sy Andasibe, omaly. Fahoriana ny an’ireo mpampiasa ny lalana; tsy misy ”déviation” azy nialana, ny herika nifafy tsy nifankahitana…
Nitsivalana teo afovoan’arabe mihitsy ilay fiarabe ka tsy nahafahan’ny fiara hafa nandeha, na nanao hitsin-dalana fotsiny aza. Araka ny fantatra, nalama ny lalana noho ny erika matevina amin’iny ilany atsinanana iny, ka anisan’ny nampisosa ilay kamiao izany. Ity farany rahateo izay nitondra entana ka mora nalefan’ny lalana malama ny “remorque”. Tsy nisy ny olona naratra tamin’ity loza ity fa ny fahatapahan-dalana kosa no tena nampimenomenona ny mpitondra fiara.
Nambaran’ny olona fa efa ho iray andro ny fahatapahan’ny lalana. “Fiara niala tany Toamasina tamin’ny 7 ora maraina, mbola taraiky eo amin’ity kamiao ity tamin’ny 4 ora hariva. Taraiky avokoa na ny fiara avy any Toamasina ho aty Antananarivo na ny mifamadika amin’izay”, hoy ny olona. Miandry ny fiara hanala ilay kamiao io avy aty Antananarivo vao afaka ity fiara ity, raha ny fantatra ihany.
Matetika isehoana kamiao mivadika amin’iny lalam-pirenena faharoa iny. Noho ny lalana malama sy miolakolaka ka mahatonga ny loza matetika. Vao ny fiantombohan’ny volana aogositra lasa teo, kamiao nitondra menaka iray nivadika teo afvoan’arabe teo Ambatolaona. Tsy lavitra teo, kamiao roa nifandona ka ireo no nanapaka ny lalana efa ho iray andro sy iray alina. Nitohana efa amina kilaometatra ny fiara ho any Toamasina sy ho aty Antananarivo vao afaka teo an-toerana.
“Ny lalana aloha hatreto tsy afaka ovaina fa ny mpamily no samy hitandrina amin’ny fitondrana fiara. Tsy ny kamiao ihany fa na ireo taksiborosy sy fiara madinika aza, mba hisorohana ny loza mety hitranga”, hoy ny fanazavan’ny mpitandro filaminana tonga teny an-toerana.
Fiara nitondra entana nivadika
Fiara mpitatitrentana iray no nivadika teo anelanelan’Antsohihy sy Port-Berger miala kely an’i Betomendry, omaly, tokony ho tamin’ny 4 ora maraina. Tsy nisy ny aina nafoy fa ny entana no simba. Raha ny fanazavana azo, resin-tory hono ilay mpamily ka izay no nahatonga ny loza. Niparitaka eto amin’ny arabe ny entana. Mba tsy nisy kosa anefa ireo olona nifarombaka izany tahaka ny nahazo ny labiera teny Ambohibao sy ny toaka teny Ambatofotsy.
Endriky ny fahantran’ny olona amin’ny lafiny rehetra mihitsy ity fandrombahana entana very ity. Tsy ny hanampy na hamonjy ny olona tra-boina no ataon’ny olona fa ny hangalatra ny fananan’olona. Azo enjehina araka ny lalàna ny olona maka ireny entana very amin’ny arabe ireny. Sady fandikan-dalàna no fahafaham-baraka noho ny fahantrana diso tafahoatra ka zara aza misy hamaharana hihinanana kely?